Boriborintany V : betsaka ny asa maika tokony hataon’ny kaominina | NewsMada
Boriborintany V : betsaka ny asa maika tokony hataon’ny kaominina
Par Taratra sur 26/02/2016
Ho tohin’ny fijerena ifotony ny fiainan’ ny mponin’Antananarivo Renivohitra, nanatanteraka fitsidihana teny amin’ny boriborintany fahadimy ny fiadidiana ny Tanàna omaly. Nitarika ny delegasiona ny talen’ny kabinetra, ny sekretera jeneraly, ny lefitra fahatelon’ny ben’ ny Tanàna ary ny delegen’ny boriborintany V.
Nojerena nandritra izany ny fivoahan’ny rano teny Masay izay hita fa tsentsin’ny tany sy ny tsinkafona ka mila fanadiovana haingana. Notsidihana ihany koa ny fokontany Amboditsiry izay nahitana ny fahasimban’ny lalankely, ny tsy fahampian’ny andrin- jiro manazava ary ny olan’ny fikorianan’ny rano izay niarahana tamin’ny mponina eny an- toerana.
Nitohy tamin’ny fifanakalozan- kevitra tamin’ireo mpiasan’ny boriborintany izany. Afaka nitatitra ireo asa efa vita sy ny lesoka izay tokony harenina hanatsaràna ny asa ny solontenan’ireo mpiasa miisa 100 eo anivon’ity boriborintany ity.
Tsy nohadinoina ihany koa ny nitsidika ny EPP Amboditsiry izay eo ambany fiahian’ny kaominina Antananarivo. Hita tamin’izany ny olan’ny fivoahan’ny rano izay manimba ny fotodrafitrasa sy manohintohina ny fianaran’ireo mpianatra.
Manoloana izany anefa, mahavelom-panantenana ny fisian’ny toerana fanodinana fako ho lasa zezika izay afaka manampy ny fivelaran’ny rafitra fanadiovana sy fidiovana (RF2) amin’iny faritra iny.
Fanampin’izay, notsidihina teny ihany koa ny zohin-dRasalama izay anisan’ny toerana mirakitra ny tantaran’Antananarivo.
Nandritra ny fandraisam- pitenenan’ny talen’ny kabinetra Atoa Jean Pierre, notsindriany fa tanjon’izao hetsika izao ny fihainoana ny hetahetan’ny mponina ahafahana mampifanitsy izany amin’ny tetikasan’ny ben’ny Tanàna.